Mgbe ị na-enweghị ike inweta data achọrọ na weebụ, n'ebe ahụ bụ ụzọ ndị ọzọ mmadụ nwere ike isi mee iji nweta nsogbu ahụ dị mkpa. Dịka ọmụmaatụ, mmadụ nwere ike ịnweta data site na API weebụ, wepụ data sitere na PDFs dị iche iche ma ọ bụ site na ebe nrụọrụ weebụ na-ekpochapụ ihuenyo. Iwepụ data site na PDFs bụ ọrụ siri ike dị ka PDF anaghị enwekarị ozi zuru ezu nke onye nwere ike ịchọ. N'aka nke ọzọ, n'oge usoro nchọta ihuenyo, ọdịnaya a na-ewepụta bụ nke koodu ma ọ bụ site n'iji ihe eji eme ihe na-emepụta. Ịchọta data weebụ nwere ike ịbụ ọrụ siri ike, ma ozugbo otu onye nwere echiche nke ihe ọ dị mkpa ka eme, ọ ga-adị mfe.
Otu n'ime ihe mgbaru ọsọ weebụ kachasị mma bụ inwe ike ịnweta data ị nwere ike ịgụta maka igwe - plafonnier abat jour design. Ejiri kọmputa nye nhazi data a, na ufodu ihe omuma atu ya bu XML, CSV, Excel files, na Json. Nchịkọta ngwaọrụ nwere ike ịmepụta bụ otu n'ime ụzọ dịgasị iche iche nke mmadụ nwere ike isi mee iji nweta ihe ntanetị weebụ dịka ọ bụ usoro dị mfe na ọ dịghị achọ ọkwa dị elu iji mee ya.